Maamulaha Sundial ayaa saadaaliyay xidhitaanka wayn ee dukaamada xashiishka ee Kanada • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn Saamiyada & Dhaqaalaha Maamulaha Sundial ayaa saadaaliyay xidhidh wayn oo bakhaarrada xashiishada ee Kanada
Saamiyada & DhaqaalahacannabisCBDWararka
Maamulaha Sundial ayaa saadaaliyay xidhidh wayn oo bakhaarrada xashiishada ee Kanada
albaabka Ties Inc. 8 May 2022
maqaal by Ties Inc. 8 May 2022
Maamulaha mid ka mid ah hawl-wadeennada ugu waaweyn Kanada ee tafaariiqda xashiishadda ee dadka waaweyn ayaa ka dhawaajisay mowjadda xidhitaannada suurtagalka ah.
1 Dukaamada xashiishka ayaa khatar ku jira
2 Qorayaasha Sundial
Warqad uu u diray saamilayda, maamulaha shirkadda Sundial Growers Zachary George ayaa ka digay xidhitaanka wayn ee dukaamada xashiishadda. Tafaariiqda xashiishka ee Kanadiyaanka ayaa tartan adag kala kulmaya badinta xarumaha tafaariiqda xashiishadda. Tani waxay keenaysaa buux-dhaafka iyo hoos u dhaca qiimaha iyo marginsyada.
Dukaamada xashiishka ayaa khatar ku jira
Sida laga soo xigtay Cannabis Benchmarks, oo ah shirkad aruurisa xogta warshadaha, 3.138 dukaamada xashiishadda ayaa laga furay Kanada bishii hore. In ka badan saddex meelood meel dhammaan tafaariiqlayaasha ayaa halis ugu jira in la xidho, maamulaha ayaa yidhi. On Ontario oo keliya, 1.468 dukaamada marijuana nidaamsan - ku dhawaad ​​kala badh dhammaan dukaamada xashiishadda sharciga ah Canada.
"Inta badan tafaariiqlayaasha waxay la halgamayaan inay faa'iido helaan, waxaana hadda bilaabeynaa inaan aragno xiritaanno xirmo toddobaadle ah," ayuu ku qoray warqadda. Sundial waxay sheegtay inay ka shaqeyso shabakada tafaariiqda marijuana ee ugu weyn Kanada, oo leh ilaa 180 goobood.
Goobahaasi waxay ka kooban yihiin bakhaaro ay shirkaddu leedahay, goobo ganacsi, iyo kuwo kale. Sannadkii hore, Sundial waxay iibsatay shabakadda tafaariiqda ee Spiritleaf $131 milyan oo doollar Canadian ah ($107 milyan) oo caddaan ah iyo saamiyo ah. Heshiiska waxaa ku jiray 86 shirkadood iyo goobo ganacsi, kuwaas oo koray ilaa 104 dukaan. George wuxuu sheegay in Sundial ay xidhay 11 bakhaar.
Sundial sidoo kale waxay leedahay qiyaastii 63% Nova Cannabis - tafaariiqle ka shaqeeya Alberta, Saskatchewan iyo Ontaariyo - iyada oo la soo wareegtay dhawaantan Alcanna, oo ah mid ka mid ah tafaariiqda khamriga ee ugu weyn Waqooyiga Ameerika, $ 346 milyan.
Xigasho: mjbizdaily.com (EN)
Cannabinoid cusub oo laga helay awoodda 30x ...
Talyaanigu waxay si wada jir ah u cabbaan si wada jir ah iyaga oo aan sare u qaadin ...
MDMA -da been -abuurka ah ee ku baahay England